လက်ရှိ ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး အမေဇုန် သူဌေးကြီး ဂျက်ဖ် ဘီဇို့စ် - Thutazone
လက်ရှိ ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး အမေဇုန် သူဌေးကြီး ဂျက်ဖ် ဘီဇို့စ်
By ThutammPosted on December 22, 2017 May 16, 2018
Amazon.com. ဝက်ဆိုဒ် ကုမ္ပဏီကြီး၏ တည်ထောင်သူဖြစ်သော ဥက္ကဋ္ဌ ၊ စီအီးအို နှင့် သဘာပတိ ကြီးဖြစ်သူ ဂျက်ဖ် ဖယ်ရီ ပရီစတင် ဂျက်ဖ် ဘီဇို့စ် ကို ၁၉၆၄ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ ပရင်စတန် တက္ကသိုလ် ၏ Tau Beta Pi ဘွဲ့ရ ဘီဇို့စ် သည် Amazon ကို မတည်ထောင်မီ စီမံ ၊ ဘဏ္ဍာ စီစစ်ရေးမှူး အဖြစ် D. E. Shaw & Co ကုမ္ပဏီတွင် ၁၉၉၄ခုနှစ် အထိ လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
ဘီဇို့စ်၏ အမေဘက်က ဘိုးဘေးဘီဘင်များသည် Texas တက်(စ)ဆက်ပြည်နယ် တွင် အခြေချနေထိုင်ကြသူများဖြစ်သည်။ ကော်ကျူလာ Cotulla ဒေသတွင် မျိုး ရိုးစဉ်ဆက် မြေ ၂၅,၀၀ဝ ဧက (၃၉မိုင်ခန့်) အကျယ်ရှိ (နွား)မွေးမြူရေးခြံကြီး များပိုင်ဆိုင်သည်။ ဘီဇို့စ်၏ (မိခင်၏ အဖေ) အဖိုးသည် Albuquerque မှ အမေရိကန် အနူမြူစွမ်းအင် ကော်မရှင်၏ ဒေသဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားရေးမှူး လည်း ဖြစ်သည်။
အဖိုးဖြစ်သူသည် အငြိမ်းစား ယူပြီးနောက် မွေးမြူရေးခြံလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ဘီဇို့စ် လူငယ်ဘဝ၏ နွေရာသီအချိန်များတွင် သူ၏အဖိုးနှင့်အတူ ကြီးမား များပြားလှစွာသော စီမံခန့်ခွဲရေးများ လုပ်ကိုင်ရင်း ကုန်လွန်ခဲ့သည်။ လမ်းလျှောက်တတ်ကာစ ငယ်ရွယ်စဉ်ကပင် သူ၏ ကလေးကုတင် ကို ဝက်အူလှည့်ဖြင့်ဖြုတ်ရန် ကြီးစားသည်ကိုထောက်ရှူ၍ ဘီဇို့စ်၏စက်မှူပိုင်းဆိုင်ရာသင်လွယ်တတ်လွယ်မှု ပါရမီကို ခန့်မှန်း နိုင်သည်။
မိခင်ဖြစ်သူ ဂျက်ကီ သည် ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် ဆယ်ကျော်သက် အရွယ်ကပင် နယူးမက်စီကို ရှိ အယ်ဘူကာကွေး အရပ်တွင် ဂျက်ဖ် ဘီဇို့စ် ကို မွေးဖွားခဲ့သည်။ တစ်နှစ်ကျော်ခန့်အကြာတွင် သူမ ၏ အိမ်ထောင်ရေး ပြိုကွဲခဲ့သည်။ သားဖြစ်သူ ဂျက်ဖ် ငါးနှစ်သားအရွယ်တွင် မင်ကွယ် ဘီဇို့စ် ဆိုသူနှင့် နောက်အိမ်ထောင်ပြုခဲ့သည်။ ကျူးဘားတွင်မွေးဖွားခဲ့သူ မင်ကွယ် သည် အသက် ၁၅ နှစ်သားအရွယ်ကပင် အမေရိကသို့ ပြောင်းရွေ့အခြေချ လုပ်ကိုင်ပြီး အယ်ဘာကွေး တက္ကသိုလ် ကိုလည်း တတ် ရောက်ခဲ့သည်။
အိမ်ထောင်ပြုပြီးနောက် သူတို့မိသားစုသည် တက်ကဆက်ပြည်နယ်ရှိ ဟိုစတန်မြို့သို့ ပြောင်းရွေ့ခဲ့သည်။ မင်ကွယ်သည် အိစ်အွန် ကုမ္ပဏီ၏ အင်ဂျင်နီယာ တစ်ဦးလည်း ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဂျက်ဖ်ကိုယ်တိုင်သည်လည်း 4th grade မှ 6th grade အထိ ရေးဗား အုပ်စ် မူလတန်း ကျောင်းတွင် တတ်ရောက်ခဲ့သည်။ ကလေးအရွယ်ကပင် ဂျက်ဖ် က သိပ်ပ္ပံပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွင် စိတ်အားထက်သန် ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ တစ်ဦးတည်း လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေရန်အတွက် သူ၏ ညီငယ် အခန်းထဲဝင်ရောက်မလာစေရန် လျှပ်စစ် အချက်ပေးကိရိယာကို သူ့ဘာသာတပ်ဆင်ခဲ့သည်။
သိပ္ပံဆိုင်ရာ စူးစမ်းမှုများ လုပ်နိုင်ရန် မိဘ၏ ဂိုဒေါင်ကိုလည်း သူ၏ သိပ္ပံစမ်းသပ်ခန်း အဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ထို့နောက်သူတို့မိသားစု မိုင်ယာမီသို့ပြောင်းရွေ့ခဲ့ကြသည်။ ထိုအရပ်တွင် ဘီဇို့စ် က မိုင်ယာမီ ပယ်မက်တို အထက်တန်းကျောင်းသို့ တတ်ရောက်ခဲ့ သည်။ အထက်တန်းကျောင်းသားအရွယ်ကပင် Florida တက္ကသိုလ်တွင်(ကျောင်းသားအဆင့်) သိပ္ပံဆိုင်ရာလေ့ကျင့်မှု သင်တန်း ကို တတ်ရောက်ခဲ့သည်။
ထိုသို့တတ်ရောက်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ၁၉၈၂ ခုနှစ်တွင် Silver Knight ဆုကို ရယူနိုင်ခဲ့သည် ။ သူသည် ပရင်စတန် တက္ကသိုလ်သို့ဝင်ရောက်ခွင့်ရပြီး ရူပဗေဒပညာရပ်ကို လေ့လာခဲ့သည်။ သို့သော် မကြာမီပင် ကွန်ပြူတာနယ်ပင်သို့ ပြန်လည် ဝင်ရောက်ပြီး ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ နှင့် လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ ဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ကာနက်ဂျီ မယ်လွန် တက္ကသိုလ် မှ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ ဂုဏ်ထူးဆောင် ပါရဂူ ဘွဲ့ကို ချီးမြှင့်ခြင်းခံရသည်။
၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင် ပရင့်စတန်မှ ဘွဲ့ရပြီးနောက် ဘီဇို့စ် သည် Wall Street တွင် ကွန်ပြူတာနယ်ပယ်၌လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ပြီးနောက် Fitel အမည်ရှိ ကုမ္ပဏီ ၏ နိုင်ငံတကာ ကုန်သွယ်မှု ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းမျာတွင် အသုံးပြုသော network ပိုင်းဆိုင်ရာကို တာဝန်ယူပြီး အဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည် ဘီဇို့စ် သည် Bankers Trust ကုမ္ပဏီတွင် အလုပ်လုပ်ရင်း ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ D. E. Shaw & Co. ကုမ္ပဏီအတွက် လည်း computer science ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် Amazon.com ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ Amazon စီးပွားရေး စီမံကိန်း ကို ချမှတ်နိုင်ခဲ့ပြီး နယူးယောက်မှ ဆီတယ် အထိ သူ၏ လုပ်ငန်းများကို လွမ်းခြုံမှု ရှိစေရန် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ Amazon လုပ်ငန်း အစီအစဉ်ကို လမ်းသွားနေရင်းနှင့် ရေးနေခဲ့ပြီး လုပ်ငန်း စတင် အကောင်အထည်ဖော် တော့ သူ၏ မူရင်းကုမ္ပဏီ ဂိုဒေါင်ကလေး တွင် ဖြစ်သည်။
သူသည် Amazon ကို ကြိုးစား လုပ်ဆောင်ခဲ့သဖြင့် အောင်မြင်လာပြီးနောက် ထင်ရှားမှူ အရှိဆုံး စွန့်ဦးတီထွင်သူ ဘီလျံနာ တစ်ဦး ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် human spaceflight များလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် Blue Origin ကုမ္ပဏီ ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဘီဇို့စ် သည် သူ၏စီးပွားရေး လုပ်ငန်း နှင့် ပတ်သက်လျှင် လွန်စွာ ဂရုစိုက်သူဖြစ်သည်။ Condé Nast’s Portfolio.com ၏ ဖော်ပြချက်အရ သူသည် ပျော်ပျော်နေတတ်သော သူဖြစ်သော်လည်း အလုပ်နှင့် ပတ်သက်လျှင် လောဘဇောကြီးသည့်နေရာတွင်နာမည်ဆိုးသော စာအုပ်ဆန်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။ စေ့စပ်သေချာလွန်းသည့် နေရာတွင် သူထုတ်ဝေသည့် Amazon တွင်ဖော်ပြထားသည့်အကြောင်အရာများကို တစ်ခုမကျန်သိရှိ နိုင်အောင် လွန်စွာသေးငယ်သည့် အချက်အလက်လေးများက အစ ဂရုစိုက်ကြည့်ရှု လေ့ ရှိသည်။
Artificial Artificial Intelligence (AAI) ဆိုသည့် အသုံးအနှုန်း ကို Artificial Intelligence (AI) ကို ကိုးကားပြီး ဂျက်ဖ် ဘီဇို့စ် တီထွင်ခဲ့သည်။ ပမာ ဆိုရသော် ဓာတ်ပုံထဲမှ လူတစ်ဦးကို ယောက်ျား ၊ မိန်းမ အဖြစ် ခွဲခြားပေးခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် ထို သို့လုပ်ဆောင်မှု သည် ကွန်ပြူတာထက် လူသားများက ပိုမို မြန်ဆန် မှန်ကန်နေဆဲဖြစ်သည်။ Artificial Intelligence (AI) သည် အဆိုပါ လုပ်ဆောင်မှူ ကို မှန်ကန်ပြည့်စုံအောင်မဆောင်ရွက်နိုင်ချေ ။ Artificial Artificial Intelligence (AAI) ကမူ အဆိုပါ လုပ်ဆောင်ချက်မျိုးကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ (AAI) သည် Amazon Mechanical Turk ၏ စည်းမျဉ်းများကို ကို ပိုမို ထင်ရှားစေရန် အတွက်လည်းဖြစ်သည်။
ဂျက်ဖ် ဘီဇို့စ် တည်ထောင်ခဲ့သော Amazon ကုမ္ပဏီလေးသည် နှစ်ပေါင်း ၂၃နှစ်ကြာပြီး ယခုအခါတွင် ကမ္ဘာ့နံပါတ် ၁ အွန်လိုင်းအရောင်းအ၀ယ်ကုမ္ပဏီဖြစ်လာခဲ့သလို ၀န်ထမ်းပေါင်း ၅သိန်းကျော်ရှိလာသည်အထိ ကြီးထွားလာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် ရှယ်ယာများမြင့်တက်လာသည့်အတွက် ဂျက်ဖ်သည် သူဌေးကြီးဘီဂိတ်စ်ကို ဖြတ်ကျော်ကာ ပိုင်ဆိုင်မှု ၉၈ဘီလျံဖြင့် ကမ္ဘာ့နံပါတ် ၁ အချမ်းသာဆုံးနေရာကို ယူထားနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ တိုင်းမ် မဂ္ဂဇင်း ၏ ၁၉၉၉ ခုနှစ်အတွက် Person of the Year အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည် ။၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်၏ ထိပ်တန်း ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးအဖြစ် U.S. News & World Report အဖွဲ့ကြီးမှ ရွေးချယ် ခြင်းခံရသည်။
ကမ်ဘာ့နံပါတျ ၁ အခမျြးသာဆုံး အမဇေုနျ သူဌေးကွီး ဂကျြဖျ ဘီဇို့ဈ (unicode)
Amazon.com. ဝကျဆိုဒျ ကုမ်ပဏီကွီး၏ တညျထောငျသူဖွဈသော ဥက်ကဋ်ဌ ၊ စီအီးအို နှငျ့ သဘာပတိ ကွီးဖွဈသူ ဂကျြဖျ ဖယျရီ ပရီစတငျ ဂကျြဖျ ဘီဇို့ဈ ကို ၁၉၆၄ ခုနှဈ ဇနျနဝါရီ ၁၂ ရကျနတှေ့ငျ မှေးဖှားခဲ့သညျ။ ပရငျစတနျ တက်ကသိုလျ ၏ Tau Beta Pi ဘှဲ့ရ ဘီဇို့ဈ သညျ Amazon ကို မတညျထောငျမီ စီမံ ၊ ဘဏ်ဍာ စီစဈရေးမှူး အဖွဈ D. E. Shaw & Co ကုမ်ပဏီတှငျ ၁၉၉၄ခုနှဈ အထိ လုပျကိုငျခဲ့သညျ။
ဘီဇို့ဈ၏ အမဘေကျက ဘိုးဘေးဘီဘငျမြားသညျ Texas တကျ(စ)ဆကျပွညျနယျ တှငျ အခွခေနြထေိုငျကွသူမြားဖွဈသညျ။ ကျောကြူလာ Cotulla ဒသေတှငျ မြိုး ရိုးစဉျဆကျ မွေ ၂၅,၀ဝဝ ဧက (၃၉မိုငျခနျ့) အကယျြရှိ (နှား)မှေးမွူရေးခွံကွီး မြားပိုငျဆိုငျသညျ။ ဘီဇို့ဈ၏ (မိခငျ၏ အဖေ) အဖိုးသညျ Albuquerque မှ အမရေိကနျ အနူမွူစှမျးအငျ ကျောမရှငျ၏ ဒသေဆိုငျရာ ညှနျကွားရေးမှူး လညျး ဖွဈသညျ။ အဖိုးဖွဈသူသညျ အငွိမျးစား ယူပွီးနောကျ မှေးမွူရေးခွံလုပျငနျးမြားလုပျကိုငျခဲ့သညျ။ ဘီဇို့ဈ လူငယျဘဝ၏ နှရောသီအခြိနျမြားတှငျ သူ၏အဖိုးနှငျ့အတူ ကွီးမား မြားပွားလှစှာသော စီမံခနျ့ခှဲရေးမြား လုပျကိုငျရငျး ကုနျလှနျခဲ့သညျ။ လမျးလြှောကျတတျကာစ ငယျရှယျစဉျကပငျ သူ၏ ကလေးကုတငျ ကို ဝကျအူလှညျ့ဖွငျ့ဖွုတျရနျ ကွီးစားသညျကိုထောကျရှူ၍ ဘီဇို့ဈ၏စကျမှူပိုငျးဆိုငျရာသငျလှယျတတျလှယျမှု ပါရမီကို ခနျ့မှနျး နိုငျသညျ။
မိခငျဖွဈသူ ဂကျြကီ သညျ ငယျငယျရှယျရှယျ ဆယျကြျောသကျ အရှယျကပငျ နယူးမကျစီကို ရှိ အယျဘူကာကှေး အရပျတှငျ ဂကျြဖျ ဘီဇို့ဈ ကို မှေးဖှားခဲ့သညျ။ တဈနှဈကြျောခနျ့အကွာတှငျ သူမ ၏ အိမျထောငျရေး ပွိုကှဲခဲ့သညျ။ သားဖွဈသူ ဂကျြဖျ ငါးနှဈသားအရှယျတှငျ မငျကှယျ ဘီဇို့ဈ ဆိုသူနှငျ့ နောကျအိမျထောငျပွုခဲ့သညျ။ ကြူးဘားတှငျမှေးဖှားခဲ့သူ မငျကှယျ သညျ အသကျ ၁၅ နှဈသားအရှယျကပငျ အမရေိကသို့ ပွောငျးရှအေ့ခွခြေ လုပျကိုငျပွီး အယျဘာကှေး တကျကသိုလျ ကိုလညျး တတျ ရောကျခဲ့သညျ။ အိမျထောငျပွုပွီးနောကျ သူတို့မိသားစုသညျ တကျကဆကျပွညျနယျရှိ ဟိုစတနျမွို့သို့ ပွောငျးရှခေဲ့သညျ။ မငျကှယျသညျ အိဈအှနျ ကုမ်ပဏီ၏ အငျဂငျြနီယာ တဈဦးလညျး ဖွဈလာခဲ့သညျ။ ဂကျြဖျကိုယျတိုငျသညျလညျး 4th grade မှ 6th grade အထိ ရေးဗား အုပျဈ မူလတနျး ကြောငျးတှငျ တတျရောကျခဲ့သညျ။ ကလေးအရှယျကပငျ ဂကျြဖျ က သိပျပ်ပံပညာရပျပိုငျးဆိုငျရာတှငျ စိတျအားထကျသနျ ကွောငျးပွသခဲ့သညျ။ တဈဦးတညျး လှတျလှတျလပျလပျနရေနျအတှကျ သူ၏ ညီငယျ အခနျးထဲဝငျရောကျမလာစရေနျ လြှပျစဈ အခကျြပေးကိရိယာကို သူ့ဘာသာတပျဆငျခဲ့သညျ။
သိပ်ပံဆိုငျရာ စူးစမျးမှုမြား လုပျနိုငျရနျ မိဘ၏ ဂိုဒေါငျကိုလညျး သူ၏ သိပ်ပံစမျးသပျခနျး အဖွဈပွောငျးလဲခဲ့သညျ။ ထို့နောကျသူတို့မိသားစု မိုငျယာမီသို့ပွောငျးရှခေဲ့ကွသညျ။ ထိုအရပျတှငျ ဘီဇို့ဈ က မိုငျယာမီ ပယျမကျတို အထကျတနျးကြောငျးသို့ တတျရောကျခဲ့ သညျ။ အထကျတနျးကြောငျးသားအရှယျကပငျ Florida တက်ကသိုလျတှငျ(ကြောငျးသားအဆငျ့) သိပ်ပံဆိုငျရာလကေ့ငျြ့မှု သငျတနျး ကို တတျရောကျခဲ့သညျ။ ထိုသို့တတျရောကျခဲ့ခွငျးကွောငျ့ ၁၉၈၂ ခုနှဈတှငျ Silver Knight ဆုကို ရယူနိုငျခဲ့သညျ ။ သူသညျ ပရငျစတနျ တက်ကသိုလျသို့ဝငျရောကျခှငျ့ရပွီး ရူပဗဒေပညာရပျကို လလေ့ာခဲ့သညျ။ သို့သျော မကွာမီပငျ ကှနျပွူတာနယျပငျသို့ ပွနျလညျ ဝငျရောကျပွီး ကှနျပြူတာသိပ်ပံ နှငျ့ လြှပျစဈအငျဂငျြနီယာ ဘှဲ့ရရှိခဲ့သညျ။ ၂၀၀၈ ခုနှဈတှငျ ကာနကျဂြီ မယျလှနျ တက်ကသိုလျ မှ သိပ်ပံနှငျ့ နညျးပညာဆိုငျရာ ဂုဏျထူးဆောငျ ပါရဂူ ဘှဲ့ကို ခြီးမွှငျ့ခွငျးခံရသညျ။
၁၉၈၆ ခုနှဈတှငျ ပရငျ့စတနျမှ ဘှဲ့ရပွီးနောကျ ဘီဇို့ဈ သညျ Wall Street တှငျ ကှနျပွူတာနယျပယျ၌လုပျကိုငျခဲ့သညျ။ ပွီးနောကျ Fitel အမညျရှိ ကုမ်ပဏီ ၏ နိုငျငံတကာ ကုနျသှယျမှု ဆိုငျရာလုပျငနျးမြာတှငျ အသုံးပွုသော network ပိုငျးဆိုငျရာကို တာဝနျယူပွီး အဖွဈလုပျကိုငျခဲ့သညျ ဘီဇို့ဈ သညျ Bankers Trust ကုမ်ပဏီတှငျ အလုပျလုပျရငျး ဒု-ဥက်ကဋ်ဌ ဖွဈလာခဲ့သညျ။ D. E. Shaw & Co. ကုမ်ပဏီအတှကျ လညျး computer science ဆိုငျရာလုပျငနျးမြားကိုလညျး လုပျကိုငျခဲ့သညျ။ ၁၉၉၄ ခုနှဈတှငျ Amazon.com ကို တညျထောငျခဲ့သညျ။ Amazon စီးပှားရေး စီမံကိနျး ကို ခမြှတျနိုငျခဲ့ပွီး နယူးယောကျမှ ဆီတယျ အထိ သူ၏ လုပျငနျးမြားကို လှမျးခွုံမှု ရှိစရေနျ လုပျဆောငျခဲ့သညျ။ Amazon လုပျငနျး အစီအစဉျကို လမျးသှားနရေငျးနှငျ့ ရေးနခေဲ့ပွီး လုပျငနျး စတငျ အကောငျအထညျဖျော တော့ သူ၏ မူရငျးကုမ်ပဏီ ဂိုဒေါငျကလေး တှငျ ဖွဈသညျ။
သူသညျ Amazon ကို ကွိုးစား လုပျဆောငျခဲ့သဖွငျ့ အောငျမွငျလာပွီးနောကျ ထငျရှားမှူ အရှိဆုံး စှနျ့ဦးတီထှငျသူ ဘီလြံနာ တဈဦး ဖွဈလာခဲ့သညျ။ ၂၀၀၄ ခုနှဈတှငျ human spaceflight မြားလုပျဆောငျနိုငျရနျ Blue Origin ကုမ်ပဏီ ကို တညျထောငျခဲ့သညျ။ ဘီဇို့ဈ သညျ သူ၏စီးပှားရေး လုပျငနျး နှငျ့ ပတျသကျလြှငျ လှနျစှာ ဂရုစိုကျသူဖွဈသညျ။ Condé Nast’s Portfolio.com ၏ ဖျောပွခကျြအရ သူသညျ ပြျောပြျောနတေတျသော သူဖွဈသျောလညျး အလုပျနှငျ့ ပတျသကျလြှငျ လောဘဇောကွီးသညျ့နရောတှငျနာမညျဆိုးသော စာအုပျဆနျသညျ့ ပုဂ်ဂိုလျဖွဈသညျ။ စစေ့ပျသခြောလှနျးသညျ့ နရောတှငျ သူထုတျဝသေညျ့ Amazon တှငျဖျောပွထားသညျ့အကွောငျအရာမြားကို တဈခုမကနျြသိရှိ နိုငျအောငျ လှနျစှာသေးငယျသညျ့ အခကျြအလကျလေးမြားက အစ ဂရုစိုကျကွညျ့ရှု လေ့ ရှိသညျ။
Artificial Artificial Intelligence (AAI) ဆိုသညျ့ အသုံးအနှုနျး ကို Artificial Intelligence (AI) ကို ကိုးကားပွီး ဂကျြဖျ ဘီဇို့ဈ တီထှငျခဲ့သညျ။ ပမာ ဆိုရသျော ဓာတျပုံထဲမှ လူတဈဦးကို ယောကျြား ၊ မိနျးမ အဖွဈ ခှဲခွားပေးခွငျးဖွဈသညျ။ သို့သျော ထို သို့လုပျဆောငျမှု သညျ ကှနျပွူတာထကျ လူသားမြားက ပိုမို မွနျဆနျ မှနျကနျနဆေဲဖွဈသညျ။ Artificial Intelligence (AI) သညျ အဆိုပါ လုပျဆောငျမှူ ကို မှနျကနျပွညျ့စုံအောငျမဆောငျရှကျနိုငျခြေ ။ Artificial Artificial Intelligence (AAI) ကမူ အဆိုပါ လုပျဆောငျခကျြမြိုးကို ပိုမိုကောငျးမှနျစရေနျ ပွုလုပျပေးခွငျးဖွဈသညျ။ (AAI) သညျ Amazon Mechanical Turk ၏ စညျးမဉျြးမြားကို ကို ပိုမို ထငျရှားစရေနျ အတှကျလညျးဖွဈသညျ။
ဂကျြဖျ ဘီဇို့ဈ တညျထောငျခဲ့သော Amazon ကုမ်ပဏီလေးသညျ နှဈပေါငျး ၂၃နှဈကွာပွီး ယခုအခါတှငျ ကမ်ဘာ့နံပါတျ ၁ အှနျလိုငျးအရောငျးအဝယျကုမ်ပဏီဖွဈလာခဲ့သလို ဝနျထမျးပေါငျး ၅သိနျးကြျောရှိလာသညျအထိ ကွီးထှားလာခဲ့ပွီဖွဈသညျ။ လကျရှိအခြိနျတှငျ ရှယျယာမြားမွငျ့တကျလာသညျ့အတှကျ ဂကျြဖျသညျ သူဌေးကွီးဘီဂိတျဈကို ဖွတျကြျောကာ ပိုငျဆိုငျမှု ၉၈ဘီလြံဖွငျ့ ကမ်ဘာ့နံပါတျ ၁ အခမျြးသာဆုံးနရောကို ယူထားနိုငျပွီဖွဈသညျ။ တိုငျးမျ မဂ်ဂဇငျး ၏ ၁၉၉၉ ခုနှဈအတှကျ Person of the Year အဖွဈ သတျမှတျခွငျးခံရသညျ ။၂၀၀၈ ခုနှဈတှငျ အမရေိကနျ၏ ထိပျတနျး ခေါငျးဆောငျ တဈဦးအဖွဈ U.S. News & World Report အဖှဲ့ကွီးမှ ရှေးခယျြ ခွငျးခံရသညျ။
Previous post မြန်မာ့သမိုင်းထဲက သေနတ်နဲ့လုပ်ကြံခြင်းခံရတဲ့ နာမည်ကျော်ဆရာတော်ကြီး
Next post ရေတံခွန်တွေရဲ့ ဘုရင် (သို့) ဥရောပရဲ့ အားအပြင်းဆုံးရေတံခွန် Dettifoss